अहंकारके के हो ? यसलाई कसरि त्याग्ने ? अनि जीवनमा कसरि अगि बढ्ने ? जीवन उपयाेगी लेख - ज्ञानविज्ञान
हामी सबै जीवनमा केहि बन्न केहि प्राप्त गर्न चाहान्छौ । जीवनमा सफल हुन चाहान्छौ तर धेरै मानिसमा एउटा नराम्रो बानि हुन्छ । धेरै मान्छेहरु हुन्छन जस्ले अरु अगि नबढोस भन्ने चाहान्छन अरुको रिस गर्छन अहंकार गर्छन । अरुको प्रगतिमा रिस गर्छन आफुले आफुमा अहंकार गर्छन । जब हामी रिसाउछौ , अहंकार गर्छौ हामी बिर्सिनछौ हामीलाई के भएको थियो , हामीलाई कुन पिडा थियो । यदि हामीले त्यती बेला कुनै गल्ति गर्यौ भने पनि अहंकारको कारण यति अन्धो हुन्छौ कि आफ्नो गल्ति समेत सुहिकार गर्दैनौ अनि पछि हामीलाई आफुमाथि पछुतो लाग्छ ।
अहंकारके के हो ? यसलाई कसरि त्याग्ने अनि जीवनमा अगि बढ्ने :
कस्तो बिचित्रको हुन्छ है यो अहंकार जब यसले शिर उठाउछ तब मान्छेले भुल्छ उसलाई कुन पिडा थियो उसलाई के भएको थियो । केवल याद रहन्छ त यो कि कसले के पायो ? को कति आगी बढ्यो ? जबकि साँचो कुरा त यो हो कि इर्ष्य, असत्य, रिस, क्रोध, लोभ, मोह जस्तो मानसिक बिचारले गर्सत हुनुनै रोग हो अहंकार हो । असलमै मान्छेको यो शत्रु इर्ष्य, असत्य, रिस, क्रोध, लोभ, मोह बाहिरबाट होइन उसको आफ्नो अहंकार देखी जन्मन्छ असलमै मान्छेको यो शत्रु बाहिरबाट होइन उसको अहंकार देखी जन्मन्छ ।
हामीले यो कुरा आफुलाई सम्झाउनु पर्छ अरे के फरक पर्छ यदि हाम्रो साथी हामीभन्दा चार कदम अगाडी बढ्छ हामी किन अहंकार गर्नु । आफ्नो यो मानसिक बिराम यो रोगलाई चिनुहोस । यो देखि सचेत रहनुस् । यसलाई आफुबाट टाढा राखने प्रयास गर्नुस तब मात्र तपाई जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति संग जस्तो सुकै आपत् संग लड्न सक्नु हुन्छ । अहंकार केवल भ्रम हो । यदि हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौ भने भविष्यमा ठुलो आपत् झेल्नु पर्ने हुन्छ । बिपतीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले समय हुदानै आफ्नो अहंकारलाई त्याग्नुस् यसलाई सके सम्म आफुबाट टाढा राख्नुस् । हामी सबै जन्मेका छौ एक दिन हामी मरेर जानु छ यो जीवनको एक मात्र सत्य हो । तब किन ? किन अहंकारमा बच्नु अरुको किन रिस गर्नु ।
कसैले क्या खुब भनेका छन् :
जित कसको लागि हार कसको लागि
जीवन भर यो झगडा कसको लागि
जो आएको छ उ मर्छ एकदिन फेरी यो
अहंकार कसको लागि
हामीले केहि सम्बन्धि थप जानकारी दिइएका छाै
तिम्राे आजकाे समय भाेली फर्केर आउदैन । र, मृत्यु शास्वत सत्य हाे, तिमी कतिबेला यस सँसारबाट बिदा हुनुपर्ने हाे, त्याे पनि थाहाँ छैन । त्यसैले, जे गर्नुछ, आजै गर । जे सुरू गर्नु छ, अहिले नै गर । सबैलाइ सम्मानजनक व्यवहार गर ।
अफ्ठ्याराेमा बेवास्ता गर्नेहरू धेरै हुन्छन् भने प्रगतिमा खुट्टा तान्नेहरू धेरै हुन्छन् । त्यसैले जस्ताेसुकै परिस्थितिमा पनि एक्लै उभिन सिक ।
सफलता र असफलता, सुःख र दुःख, स्थायी रूपमा रहदैनन् । जीवकाे जुनसुकै माेडमा पनि आफुलाइ सम्हाल्न र सुःखमा नमात्तिन र दुःखमा नआत्तिन सिक ।
तिमीले सबैलाइ खुसी बनाउन सक्दैनाैँ । तिमीले जतिनै राम्राे काम गर वा राम्राे व्यवहार गर, तिमीले आलाेचना खेप्नु नै पर्छ त्यसैले सबैभन्दा पहिले आफु खुशी हुने काम गर अनि त्याे खुसिमा खुसि हुनेहरूलाइ समेट्ने प्रयास गर ।
खुशी भनेकाे साना-साना कुराहरूमा हुन्छ । जीवनका प्रत्येक क्षण अमुल्य हुन्छन् । साना-साना कुराहरूमा अड्किएकाे खुशीलाइ बुझ।
तिमीले मेहनत र नियममा रहेर काम गरेता पनि सबै काम सफल नहुन सक्छन् । ति कामहरूले पढाउने पाठलाइ सिक, आफ्ना पाइला नराेक किनकी सबै काम असफल हुदैनन् ।
तिमीले भाेगी रहेका समस्याहरू अरूले पनि भाेगेका छन् । सबै आ-आफ्नै चुनाैतीसँग लड्न व्यस्त छन् । आफुलाइ दुखी र अरूलाइ खुसी देख्न छाेड । मुस्कुराउन सिक ।
सबै कुरा तिमीले साेचे जस्ताे कहिल्यै हुदैन । जे पाउँछाैँ, त्यसलाइ राम्राे बनाउने प्रयास गर ।
Up Next आफ्ना नराम्राे बानीहरू कसरी हटाउने ? जान्रुहाेस्